Norwich - Tele RELAY တစ်ခု
မူလစာမျက်နှာ » အားကစားများ Norwich »
Tele RELAY တစ်ခု 16 စက်တင်ဘာလ 2019
Norwich လီဗာပူးလ်တစ်ချိန်ကထပ်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ကိုဦးဆောင်သည်ပရီးမီးယားလိဂ်၏ကျန်က Man City, ရိုက်ပုတ်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုကမ်းလှမ်းခံရနိုငျနှင့်အာဆင်နယ်ရိုးရှင်းစွာ Unai Emery အောက်မှာပိုကောင်းမရပေကြောင်းပြသထားတယ်။ တနင်္ဂနွေနစ်ခ် Muller ၏ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း
ကျော်: ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် Farke ၏ပြန်ဆပ် | လောလောဆယျတော့လီဗာပူးလ် | စူပါလီဗာပူးသုံး | မီးပေါ်မှာအာဗြဟံသည် | Willock ရှာဖွေတွေ့ရှိမှု | Leicester ၏ဝမ်းမြောက်ခြင်းအကြောင်း | အာဗြဟံသည်ကြယ်များ | အမေရိကန်ရလဒ် | ကြိုတင်ခန့်မှန်းအာဆင်နယ် | အဆိုပါစပါးအကျပ်အတည်းရှောင်ရှားကြပါပြီ | ဝံပုလွေမင်ျဂလာ
Norwich သူ kryptonite စီးတီးထင်ရှား?
မန်ချက်စတာစီးတီးယခုအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်မှုနှင့်အတူအဖွဲ့များဆန့်ကျင် 2019 နှစ်ခုလိဂ်ဂိမ်းများကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဇန်နဝါရီလမှာတော့နယူးကာဆယ်တစ်ပြင်းစွာသောအကာကွယ်ရေးနှင့်အတူသူတို့ကိုရိုက်နှက် 11 ဟာခေါင်းမာမြို့ Rafa ဘင်နီတက်ဇ်အဘို့အမှုတ်။
စနေနေ့ သူတို့ 3-2 Norwich အဖွဲ့ကရိုက်နှက်ခဲ့ကြ ပိုပြီးတက်ကြွသော, နှင့်အမှားတွေလုပ်ကြောင်းအတင်းအကျပ်စီးတီးနှင့်အတူ။ ဤသည် Teemu Pukki များအတွက်အထင်ရှားဆုံးအမှုဖြစ်ပါသည် de ရမှတ်အောင်: အများဆုံးအသင်းတွေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သမျှ3ကစားသမားကိုဆုံးရှုံးသကဲ့သို့ 1-10, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးထက်ပိုမှတ်သားစရာများဥပမာဒဏ်ရာကာလ၌ရောကျ လာ. , Norwich အစောပိုင်းကအဆက်မပြတ်စီးတီးတွန်းအားပေး, သူတို့ကဆက်လက်၎င်း၏ခဲထိန်းသိမ်းခြင်း မြေပြင်ပေါ်မှာ။
ဤသည်ကိုသူဒါစီးတီး၏ပိုကောင်းရရှိရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအကြောင်းကိုတစ်ခုခုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြသည်? အဲဒါကိုတိုက်ခိုက်အနိုင်ယူဖို့ "အစီအစဉ်ကို" လား? ဒီတစ်ခါလည်း။ ကြိုးစားသောအများစုကအဖွဲ့များအလုံအလောက်အလေးပေးနှင့်အတူပျက်စီးပေမယ့်အများဆုံးအသင်းများကိုလည်းခုခံကာကွယ်ဖို့ကြိုးစားကြည့်ပါ။ ဤသည်ဆက်ဆက်အရှိဆုံးပျော်စရာချဉ်းကပ်မှုဖြစ်ပါသည်: တက်ကြွစွာအစားသူတို့ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်တိုင်အောင်ပိုပြီးအန္တရာယ်များလျှင်ပင်စောင့်ဆိုင်း၏စီးတီးကိုထိခိုက်ဖို့ကြိုးစားနေ။
စီးတီးဟာဂိမ်းနောက်ဆုံးရာသီဆုံးရှုံးခဲ့ရခြင်းနှင့်ခေါင်းစဉ်အနိုင်ရနေဆဲဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာလျော့ကြောင်းကြေငြာအတွက်လွန်းအလျင်စလိုဖြစ်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ရှုံးနိမ့်ယခုရာသီကိုအနည်းဆုံးအခြားကစားသမားအားပေးသူတို့အတော်လေး fallible ပြောပါတယ်။
နှစ်ခုဖြည့်စွက်နေသောခေါင်းစဉ်: စကားမစပ်တစ်ခုကိုမြှင့်တင်ရေးနောက်ဆုံးရာသီအနိုင်ရခဲ့သော Norwich အသင်းကိုးအဖွဲ့ဝင်များကြောင်းမှတ်သားရပါမည် ဆမ် Byram West Ham ချေးငွေဗြိတိန်နိုင်ငံ Nottingham သစ်တောကျေးလက်မှာချေးငွေနှင့် loanee ပြီးနောက်£ 750 000 န်းကျင်ဘို့လက်မှတ်ရေးထိုး အီဘရာဟင် Amadou - - ရှိနေပြီးအခြားနိုင်ငံများတွင်တစ်ဦးက Full-စုံတဲ့ကစားသမား။
Norwich နေဆဲယခုရာသီဖျက်သိမ်းခံရဖို့အများဆုံးဖွယ်ရှိကစားသမား၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်, သို့ရာတွင်သူ၏အောင်မြင်မှုအလွယ်တကူတစ်စိတ်ပျက်စရာပထမဦးဆုံးရာသီအပြီးထုတ်ပယ်ခဲ့နိုင်သည့်ဦးခေါင်းနည်းပြဒံယလေသ Farke ၏အောင်ပွဲတစ်ခုဖြစ်သည်။ တာဝန်ခံပေမယ်သောယုံကြည်ခြင်းထိန်းသိမ်းထားနှင့်ယခုသူတို့ကိုကြည့်ရှုခဲ့သည်။
ရာသီစတင်ပြီးနောက်ငါးဂိမ်းများ, လီဗာပူးလ်စုံလင်သည်။ စနေနေ့က Carrow Road မှာရလဒ်နှင့်အတူသူတို့ပြီးသားမန်ချက်စတာစီးတီးကျော်ငါးမှတ်ခဲရှိသည်နှင့်ပထမဦးဆုံးအကြားဆက်ဆက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါစိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းတစ်ခုကိုဖွစျလိမျ့မညျ: သူတို့ကဒီအသစ်က status ကိုတုံ့ပြန်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်လို?
နောက်ဆုံးရာသီ, သူတို့ကနောက်ဆုံးသောနေ့၌မှခေါင်းစဉ်ပြိုင်ပွဲ၌ရှိပေမယ့်သူတို့ကယ့်ကိုပထမဦးဆုံးအကြားခဲ့ကြသည်တစ်ခုတည်းသောအချိန်စီးတီးချေမှုန်းပြီးနောက်ဇန်နဝါရီလအတွင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ နယူးကာဆယ်လ်၌၎င်း, ဤလေးယောက်နောက်ဆုံးမှာသူတို့ကိုခေါင်းစဉ်ကုန်ကျသောဤအချိန်လောက်တွင်ခြောက်လဂိမ်းထဲမှာဆွဲယူဖြစ်ကြသည်။ ဤဇာတျလမျးဖနျကြောင့်သူတို့ကစွပ်စွဲပုဂ္ဂိုလ်များမဟုတ်ဘဲသူတို့ကိုလိုကျစားသူတွေထက်မရောက်ရနေကြတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကနေရရှိလာတဲ့ဖိအားများ၏ကွဲပြားခြားနားသောပုံစံနှင့်အတူအဘယ်သို့ပြုမည်အရာကိုလာမယ့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းကြည့်ဖို့ intriguing ပါလိမ့်မည်သာတွေ့ရှိရပါသည်။
သူတို့ထဲကတဦးတည်းနှစ်ခုရာသီအတွက် 19659004 ဂိုးသွင်းတဲ့သူမို Salah ဖြစ်ပါသည်, သင်အခိုင်အမာနိုင်သည်စိတ်ကောင်းသော, Firmino ဖြစ်ကောင်း Salah  ဤလီဗာပူးလ်တိုက်စစ်မှူးသည်ကောင်းမည်မျှပြသထက် သာ. ကောင်း၏ အခြားနှစ်ဦးကိုသူ့ကိုထက်ပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းဒါကြောင့်ယုံကြည်။ Sadio လည်ဆံ နယူးကာဆယ်ဆန့်ကျင် (ပဉ္စမနှင့်ဆဋ္ဌမသင်စူပါဖလားရေတွက်လျှင်) ရာသီ၎င်း၏တတိယနှင့်စတုတ္ထရည်ရွယ်ချက်သွင်းယူ, နေစဉ် ရောဘတ် Firmino တစ်ဦးမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အကူအညီနဲ့ထုတ်လုပ်နှင့်သူ၏ဂိမ်း၏ကျန်အလားတူစံ၏ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်သည်ထိုသူတို့ရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လိုသိထင်ကြသလော ငါတို့ရှိသမျှသည်နားရွက်ပါပဲ။
ဖရန့်လမ်းပတ် သူသည်မိမိငယ်ရွယ်ကစားသမားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ပတ်သက်ပြီးစကားပြောသည့်အခါတစ်ဦးမွေးစားအဘ၏မာနထောင်လွှားနှင့်အတူစကားပြော ။ ချယ်လ်ဆီး 5-2 ဝံပုလွေ beats ။ ဝေးဒီအောင်မြင်သောအတွေ့အကြုံအား (အကောင်အထည်ဖော်လျှင်) အနေဖြင့်သိသာနိဂုံးချုပ်ပိုကြီးတဲ့အသင်းတွေလူငယ်များအဘို့ထုတ်ကုန်အတွက်ပိုပြီးယုံကြည်မှုရှိသင့်ပေမယ့်လည်းအလွယ်တကူဆင်းရဲသားရာသီအပြီးတွင်အဖြစ်ကစားသမားထွက်မအုပ်စိုးမပြုလုပ်သင့်သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။  Tammy အာဗြဟံ၏ယခင်အတွေ့အကြုံ ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်ကူကူဒုတိယကာလအတွက်ကောင်းသောကစားသမားတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ဘယ်တော့မှထိပ်တန်းအတွက်လုံလောက်သောအကောင်းကြောင်းအကြံပြုထားတဲ့ဆွမ်ဆီး၏ရုန်းကန်မှုတွေအသင်းအတွက်ချန်ပီယံနှင့်တဦးတည်းအလယ်အလတ်ရာသီအတွက်ဝယ်ယူခဲ့သည်။
သဘာဝကျကျကျနော်တို့ကချယ်လ်ဆီး၏နောကျကြီးတွေအမှတ်9မပေးသင့်တယ်, ဒါပေမယ့်သူကဝံပုလွေတွေဟာဆန့်ကျင်သည်သူ၏တတိယရည်မှန်းချက်ကြောင့်စိတ်ဝင်စားဖို့ကြီး - တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ရ, ရုတ်တရက်လှုပ်ရှားမှုနှင့်တိကျစွာစိမ်းဖြင့် - ဤအတိအကျအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည် သပိတ်သူဆွမ်ဆီးအတွက်အများဆုံးပွဲစဉ်အတွင်းကြိုးစားခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ပုံမှန်နှင့်အတူကမလုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့ပေမယ့်ပိုပြီးယုံကြည်မှုနှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့အသင်းအတွက်ကြောင့်အများကြီးဖြစ်ပါတယ်။
Alejandro Moreno ESPN FC အသင်း Ross ကဒိုင်ယာ Tammy အာဗြဟံသည်ဦးထုပ်တစ်ဦးခရီးစဉ်အပါအဝင်ချယ်လ်ဆီး 5-2 ဝံပုလွေတွေဟာ၏လွှမ်းမိုးသောအောင်ပွဲတုံ့ပြန်ဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
"ကျနော်တို့ထက်ပိုကောင်းတဲ့ဆော့ကစားချင်တယ်" Ole ကို Gunnar Solskjærကပြောပါတယ် ] ပြီးနောက် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက် 10မှ Leicester ရိုက်နှက် ဒါပေမယ့်ဒဏ်ရာပြဿနာများကြောင့်အခြေအနေပေးသူကြီးထွားလာ mobility နှင့်အတူအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆန့်ကျင်နေတဲ့အနိုင်ရရှိနှင့်အတူပျော်ရွှင်ရပါမည်။
ယူနိုက်တက်ပရိတ်သတ်တွေဖြစ်ကောင်းဂိမ်းရန်အသုံးပြုရသင့်ပါတယ်။ တူသျော။ သူတို့ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားသမားအချိန်လေးထုတ်လုပ်ရန်သောသူတို့ဖြစ်ကြသည် - ခြွင်းချက် 'passes, လျှပ်စီးလေဖြတ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ရတဲ့အရာတွေ finish ကို - နှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကိုထိန်းချုပ်သို့မဟုတ် execute နိုင်သူမဟုတ်သူတွေကို။ ထို့ကြောင့်သူတို့ကဒီရာသီအနိုင်ရသည့်အောင်ပွဲဖြစ်ကောင်းမဟုတ်ဘဲသူတို့လွှမ်းမိုးရှိရာပွဲထက်ရှိသူများအချိန်လေးကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မည်။
တခါတရံမှာအသင်းများကောင်းမကောင်းဖြစ်စေ, သင်အံ့သြသွားနှင့်သူတို့၏မျှော်လင့်ချက်များရှုပ်ထွေး။ အာဆင်နယ်တစ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာရှုပ်ထွေးခြင်းနှင့်တစ်ခါတစ်ရံကြောက်မက်ဖွယ်, အနည်းဆုံးစဉ်ဆက်မပြတ်, မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အတူအရအညီဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့ရေးဆွဲသည့်အခါ Watford ဆန့်ကျင် သူတို့ Pierre-Emerick Aubameyang 46 70 မှ Arsenal အသင်းအဘို့မိမိအတာလီချိုးယူနှစ်ကြိမ်သွင်းယူ, တိုက်ခိုက်မှုအတွက်ခွဲစိတ်ခဲ့ကြပေမယ့်မိမိအကာကွယ်ရေးရေချိုးခန်းနှစ်ရည်မှန်းချက်များနှင့်အောင်မြင်ခြင်းပေးခြင်း, ဆိုးရွားသောဖြစ်ပါတယ်။ လူတိုင်းထင်သကဲ့သို့။
ဒီမှာအများဆုံးလေးနက်အချက်သည်ဤကြိုတင်ခန့်မှန်းအာဆင်နယ်တိုးပါဘူးအကြံပြုကြောင်း, မ Unai Emery အောက်မှာတိုးတက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အသင်းနှင့်အတန်ငယ် "မစုံလငျ" ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမယ့်ဖြစ်သင့်အဖြစ်ခန့်အပ်ထားသည်အထိရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတိုးတက်မှုများအတွက်အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဖြစ်ရမည်။ ဤကဲ့သို့သောပိုဖျော်ဖြေပွဲအာဆင်နယ်မဟုတ်လျှင်တိုးတက်အောင်ခံရဖို့ပုံရသည်နှင့်ဒီထက်လုပ်ပိုင်ခွင့် Emery အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင် Mauricio Pochettino ဒီစပါးအတွက်အစောပိုင်းရာသီကိုဒုက္ခဖြစ်ပေါ်စေမယ့်အပြောင်းအရွှေ့ဝင်းဒိုးကိုအာရုံခဲ့ကြောင်းအကြံပြုခွင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါဟာအမြဲတမ်းလွှဲ, တကယ်နှစ်ခုသာကျယ်ပြန့်ကိစ္စရပ်များကိုဖုံးကွယ်ထားကြောင်း၎င်းတို့၏ကစားသမားလျှောက်ထားသည့်မသေချာမရေရာနဲ့တူတယ်။
သို့သော်ထိုသို့မသာသောအရာတို့ကိုကျောပုံမှန်ဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားထွက်ခွာသောအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ရစ္စတယ်ဆန့်ကျင်တလမ်းရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါစပါးသည်။ အဆိုပါစွမ်းဆောင်ရည်နန်းတော်ထက်ပိုသို့မဟုတ်လျော့နည်းဿုံအလုပ်ဖျော်ဖြေအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီ component တစ်ခုနှင့်အတူမှုများကိုထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့သည့်အတွက်ပြီးပြည့်စုံသောကိုယ်စားပြုမှုဖြစ်ခဲ့သည်။
"သင်အာရုံစူးစိုက်နေကြသောအခါ, ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းအသင်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ပြသထားတယ်" ထို့နောက် Pochettino ကဆိုသည်။ အသစ်တစ်ခုသောသူကဲ့သို့လိုက်ရှာ။ "ကျွန်မဒီခံစားမှုကိုရှာဖွေနိုင်အောင်ပျော်ရွှင်မိပါတယ်။ အခုတော့ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ဒါကပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ "
ကျနော်တို့ကဝံပုလွေစိုးရိမ်သင့်သလော ဟုတ်ပါတယ်, ဖြစ်ခြင်း ချယ်လ်ဆီးတို့ကအိမ်မှာရိုက်နှက် ချက်ချင်းနှိုးဆော်သံအသံ, သူတို့သည်သဘာဝဗီဇသူတို့သာယူရိုပါလိဂ်၏လိုအပ်ချက်များဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေဖြစ်ကြောင်းစဉ်းစားရန်ဖြစ်ပါသည်ကျလာသောလျှင်ပင်မပြုစေခြင်းငှါ။
ဒါပေမဲ့သူတို့ကဂိမ်းအနိုင်ရဘူးမသာ, ဒါပေမဲ့သူတို့ကဝေး foreground မအခန်းကဏ္ဍမှတစ်ခုတည်းသောပရီးမီးယားလိဂ်အသင်းဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကားဂိမ်းခက်ခဲပေမယ့်နောက်ဆုံးရာသီခဲ့ကြသည်, USP ဝံပုလွေတွေဟာကျနော်တို့မတိုက်သင့်ကြောင်းအဆိုပါအဖွဲ့များရိုက်တယ်။
ကျနော်တို့ဖြစ်ကောင်းသူတို့မဟုတ်ဘဲကံကောင်းသောအခါသူတို့က, ပြီးခဲ့သည့်ရာသီ၏အောင်မြင်မှုကိုပြန်လုပ်နိုင်တယ်လို့ယူဆသင့်ပါဘူး။ ဒဏ်ရာနှင့် 16 သို့မဟုတ် 17 ကစားသမားတွေနဲ့မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့သတ္တမ။ အရာ၏ဤကြင်နာလုပ်နေတာကနှစ်ကြိမ်ထက်ပိုလက်တွေ့ကျခေတ်သစ်ဂိမ်းရှိပါသနည်း တိုတိုတှငျကြှနျုပျတို့သိသိသာသာကျဆင်းလာသည်ဤရာသီကိုမျှော်လင့်နိုင်မလဲ?
အဆိုပါသိသာရွေးချယ်ပါလိမ့်မယ် Fikayo Tomori နှစ်ခုအဓိကအကြောင်းပြချက်များအတွက်, ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ဆန့်ကျင်ဆောက်သမ်တန်များအတွက်စိတ်လှုပ်ရှားချယ်လ်ဆီးအဘို့အရှည်လျားပေမယ့်ဖြစ်ကောင်းပိုပြီးအထင်ကြီးဒီတစ်ကိုယ်တော်အားထုတ်မှု Moussa Dnjepo ရိုက်။ ပထမဦးစွာသူကိုအလွယ်တကူတစ်ခုမရှိခြင်း၏သားကောင်ဖြစ်ခြင်းထဲသို့ကျနိုင်ရှိရာကအနည်းဆုံးနှစ်ခုအချက်များရှိခဲ့ မှာ Oliver Norwood အားဖြင့် နှင့်ဒုတိယအ, ထိုအရူးအလုအယက်နှင့်တင်းကျပ်စွာထိန်းချုပ်ပြီးနောက်သူစိုးရိမ်ထိတ်လန်နိုင်ပေမယ့်မှတစ်ဦးအေးမြခေါင်းကိုထားရှိမည်
တနည်းကား, ရိုင်ယန်ဘာထရန် သူကပုံပုံအခါရှက်ဖီးယူနိုက်တက်သွားရောက်ကိုပြင်ဆင်အဖြစ်ဆောက်သမ်တန်ပြင်ပတွင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ လက်ဝဲ-နောက်ကျောဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Ralph Hasenhüttlသတိထားပြီးကစားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်လည်းပိုမိုနက်ရှိုင်းတစ်ခုခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးကမော်နီတာ။
တနင်္ဂနွေ၏ luckiest အခိုက်
ဒါဟာကစားသမား Watford ဆန့်ကျင်ပြိုလဲပြီးနောက်ကံကောင်းအာဆင်နယ်ကြောင်းပြောအနည်းငယ်ထူးဆန်းတဲ့ပုံပေါ်ပေမယ့်အဆုံး၌စခွေငျးငှါ Sokratis Papastathopoulos လုံးဝပျောက် Abdoulaye Doucoure တစ်ဦးခုခံကာကွယ်လူရွှင်တော်ပြပွဲဂန်းနားပြီးပါကနှင့်ပြင်သစ်ကွင်းလယ်ကစားသမားများ၏ပစ်ခတ်ထိရောက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်အလွန်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမှမဟုတ်ရင်အာဆင်နယ်အပေါငျးတို့သအချက်များအစားနှစ်ခုရမှတ်၏ငြင်းပယ်ခံရများအတွက်တာဝန်ရှိကြပြီ။
ဤဆောင်းပါးတွင်ပထမဦးဆုံးပေါ် (အင်္ဂလိပ်လို) သည်ထင်ရှား http://espn.com/soccer/english-premier-league/story/3943752/norwichs-blueprint-for-beating-man-cityliverpool-become-the-hunted
ဘောလုံးပြိုင်ပွဲ Italy - ITA: ရော်နယ်ဒိုတစ်ဦးငွေသားစက်ဖြစ်ပါသည်, Juve အခွင့်အလမ်းကိုယူ - ခြေလျင် 01
တရုတ်: ခရစ်ယာန် Bassogog ရာသီသည်သူ၏ပဉ္စမရည်မှန်းချက်သွင်းယူ
Man ယူနိုက်တက်၏နည်းပြအခန်းကဏ္ about နှင့်ပတ်သက်ပြီး Evra ကိုပြောကြားခဲ့သည်
Foot / 2021 အရည်အချင်း - ဆင်ပွဲစဉ်ဇယား
ဝီလျံနှင့်အေးစက်နေသည့်မင်းသားဟယ်ရီနောက်ဆုံးတွင်တိတ်ဆိတ်မှုကိုပျက်ပြားသွားစေသည် - ဗီဒီယို
သောကြာနေ့တွင် Black သည် Wi-Fi နှင့် Alexa - BGR ပါသော Instant Pot အတွက်စောစောစီးစီးရောက်ရှိခဲ့သည်
သင်၏ Youtube သမိုင်း - သိကောင်းစရာများကိုအလိုအလျောက်ဖျက်ပါ
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်6,382